I-Badalona, ​​kusukela esikhathini esedlule samaRoma kuya esenzakalweni sabavakashi | Izindaba Zokuhamba
Luis Martinez | | Spain amadolobha, Yini ongayibona
IBadalona inesici sokuba ngenye yalezo zindawo ezimuncwe ukunwetshwa kwedolobha elikhulu, ngokwesimo salo Barcelona. Kodwa-ke, iyaqhubeka nokuba ngumasipala ozimele kanye nedolobha lesine elinabantu abaningi kukonke Isi-Catalonia.
Ngaphezu kwalokho, imvelaphi yayo isukela endulo ngokuphelele, njengoba kukhonjisiwe yi Izinsalela zase-Iberia naseLayetan ezitholwe endaweni yazo. Kodwa-ke, yadalwa njengedolobha ngo- amaRoma cishe nge-100 BC ngaphansi kwegama le- Baetulo. Eqinisweni, idolobha linenye yezindawo ezibaluleke kakhulu zenkathi yesiLatin eSpain. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngeBadalona, ​​sikukhuthaza ukuthi uqhubeke ufunde.
1 Yini ongayibona eBadalona
1.1 IPont del Petroli, uphawu lomuzi
1.2 Isigodlo SaseSant Jeroni de la Murtra
1.3 Izimboni zaseLa Badalona
1.4 Amapaki, amaphaphu aluhlaza aluhlaza aseBadalona
1.6 Umakhelwane waseDalt de la Vila
1.7 UMnyuziyamu waseBadalona
1.8 Indlu Yamahlengethwa kanye Nensimu yaseQuinto Licinius
Yini ongayibona eBadalona
Ngokuqondile izinsalela zamaRoma zingenye yezinto ezinhle kakhulu zedolobha laseCatalan. Futhi, eduze kwabo, amabhishi amahle, amapaki amahle nesethi enhle yezikhumbuzo. Sizohambela zonke lezi zindawo ezithakaselwayo.
IPont del Petroli, uphawu lomuzi
IPont del Petroli nefektri i-Anís del Mono
Leli bhuloho lezinyawo, elihamba ngamamitha angama-250 olwandle, njengamanje lingelinye lama- izifanekiselo kusuka edolobheni laseCatalan. Yakhiwa ngo-1965 ukuthi amathangi amakhulu kawoyela ashiye impahla yawo emathangini ayakhelwe le njongo.
Njengokulangazelela, sizokutshela ukuthi leli bhuloho lalizodilizwa ngo-2001, kodwa lasindiswa ekuqothulweni iqembu labantu baseBadalona eliholwa umpheki khekhe. UJosep Valls. Njengamanje, yindawo enhle ongazijwayeza yona ukuntweza emanzini futhi, ngaphezu kwakho konke, ukuze uhambe uzithokozise ukushona kwelanga okumangalisayo.
Isigodlo SaseSant Jeroni de la Murtra
Uzothola lesi sigodlo sezindela ngakolunye uhlangothi lomgwaqo omkhulu. Ingenye ye- ubucwebe be-gothic wesifundazwe saseBarcelona. Izakhiwo zayo zokuqala zakhiwa ngekhulu le-XNUMX, yize yabuye yanwetshwa ngokufaka i-cloister, isonto, amakhishi kanye nesela. Iphinde iqhakambise i- umbhoshongo wokuzivikela esasetshenziselwa ukuvimbela ukuhlaselwa kwezigebengu ezivela ogwini.
Izimboni zaseLa Badalona
Ngaphakathi kwemboni ye-Anís del Mono
Idolobha laseCatalan liphinde likunikeze ifa lezimboni elibanzi elenziwe ngenkathi lakhiwa ngalo mqondo phakathi nekhulu le-XNUMX. Phakathi kwalezi zakhiwo kugqame imboni endala yase-Anís del Mono, okuyinto namuhla eyigugu lomlando mayelana nokunwetshwa kwendabuko kwalesi siphuzo.
Kuyafaneleka nokuvakashela i- imboni ye-Auxiliary Company of Commerce and Industry, isakhiwo samanje esakhiwe ngo-1899 ngu UJaime Botey i Garriga, owayeyimeya futhi yedolobha. Lesi sakhiwo bekufanele senzelwe i umnyuziyamu wamahlaya. Kodwa-ke, iphrojekthi imisiwe okwesikhashana.
Amapaki, amaphaphu aluhlaza aluhlaza aseBadalona
Ngabe iSolei i Ca l'Arnús Park
Enye yezinto ezikhangayo edolobheni laseCatalan inani elikhulu lamapaki. Ingqikithi ye- Amahektha angama-96 wedolobha yizindawo eziluhlaza namaphaphu angempela ezakhamizi zakhona. Phakathi kwabo i- Ngabe ipaki kaSolei noCa l'Arnús. Le nsimu eyiqiniso yezitshalo nayo inechibi nenqaba encane, imibhoshongo efana naleyo ye- Buka kanye Amanzi ngisho negrotto.
Ngokuhambisana nalokhu, amanye amapaki edolobheni kukhona leyo yeTuró d'en Caritg, etholakala egqumeni; owaseMontigalá, ilungele ukuhamba; lokho kukaGran Sol, nezinhlobo ezithile zase-Asia; owaseNueva Lloreda, ngemishini yezemidlalo, kanye owaseCasa Barriga.
Ibhishi laseBarca María
Idolobha linayo amakhilomitha amahlanu amabhishi ezinezimo ezinhle kakhulu zokujabulela ukugeza nemishini ephelele kakhulu ukuze ukuvakasha kwakho kukhululeke. Phakathi kwalokhu sizokhuluma ngamabhishi weBarca María, del Cristall, Yabadobi, yesiteshi y de la Mora.
Umakhelwane waseDalt de la Vila
Yigama elinikezwe idolobha elidala laseBadalona, ​​amakhulu eminyaka isikhungo sangempela sezinzwa zedolobha. Njengoba ungacabanga, kuyo unezikhumbuzo eziningana zobuhle obukhulu. Phakathi kwabo, i- izinsalela zemidlalo yasesiroma en UCarrer de Les Eres.
Kepha ngaphezu kwakho konke, okuyigugu Isonto laseSanta Maria, nge-façade ye-Renaissance ehlaba umxhwele nombhoshongo omuhle kakhulu wensimbi. Futhi, eduze kakhulu nayo, i- UTorre Vella, isigodlo esihle sohlobo lwesithabathaba sangekhulu le-XNUMX. I-façade yayo yePlateresque kanye nesela layo lamaGothic kugqamile kulokhu.
Okokugcina, ungashiyi ingxenye yakudala yedolobha ngaphandle kokubona izindlu zalo zobukhosi ngesitayela seNoucentista ne-Modernista. Ngokwesibonelo, Ca l'Amigó, Can Clapés futhi i Amapulani endlu.
Izingcezu zeBadalona Museum
Sivele sikutshele ngefa elikhulu lemivubukulo elitholakala ngaphansi kwenhlabathi yedolobha laseCatalan. Ingxenye enhle yalezi zinsalela ivezwe kumnyuziyamu omangalisayo okuhambisa emigwaqweni yase Baetulo ngekhulu lokuqala BC.
Amanye amagugu aboniswe cishe kumamitha-skwele angama-3400 yiwo iziphethu ezishisayo, the i-decumanus noma umgwaqo omkhulu futhi, ngaphezu kwakho konke, i UVenus waseBadalona, isithombe esingamasentimitha angama-28 esukela ngesikhathi kusungulwa leli dolobha.
Indlu Yamahlengethwa kanye Nensimu yaseQuinto Licinius
Ngokungena emnyuziyamu uthola nelungelo lokuvakashela lezi zikhungo ezimbili. I- Indlu Yehlengethwa Futhi ingaphansi komhlaba futhi ithola igama layo kokuyigugu ihlengethwa mosaic Bahlobisa ichibi labo ukuqoqa imvula. Kwakukhulu kakhulu domus Umbhoshongo waseRoma cishe wamamitha angamakhulu ayisishiyagalombili, yize namuhla ungabona kuphela amakhulu amathathu.
Ngokwengxenye yayo, i Ingadi yaseQuinto Licinius kungahle kukudumaze kancane. Lokho okubonayo namuhla wuhlobo lwechibi lokuthi, ngesikhathi salo, kufanele ukuthi laligcwele izitshalo nezimbali. Noma kunjalo, ungathola umbono wokuthi kwakunjani nge ukuzilibazisa okubonakalayo enikezwa yisikhungo. Kule ndawo, i- Tabula Hospitalis, uhlobo lwenkontileka oluqinisekisile Owesihlanu Licinius njengomvikeli weBaetulo nokuthi ungabona futhi kumnyuziyamu.
Isikhathi esidlule samaRoma saseBadalona sasibaluleke kakhulu ukuthi, njalo ngonyaka, idolobha lithuthukisa UMagna Celebratio, lapho amabutho aseLatin ahamba khona emigwaqweni yawo nasezindaweni zobungcweti bangaleso sikhathi abekwe emakhoneni ayo.
Ekuphetheni, ikunikeza okuningi Badalona. Kufa layo elibalulekile lamaRoma kufanele ungeze izikhumbuzo eziyigugu, amapaki amakhulu namabhishi amahle. Uma uvakashela leli dolobha, ngeke uzisole ngalo. Futhi, uma ufuna ukusizakala ngohambo lwakho ukwenza eminye imisebenzi, xhumana nathi uhlu lwamapaki amanzi amahle kakhulu eCatalonia.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Spain amadolobha » Badalona